Maxaa ka jira in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir?
Maxaa ka jira in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir?
Muqdisho (Halqaran.com) – Warar aynu helayno ayaa sheegaya in xil ka qaadis rasmi ah lagu sameeyay Taliyihii Nabad Suggida Gobolka Banaadir, kadib markii xilkaasi uu ka qaaday Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Sarkaalka xilka laga qaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Ibraahim Macalin Cabdullaahi, waxaana si ku meel gaar ahi xilkaasi loogu dhiibay Ciise Maxamed Ciise, oo ka tirsan Saraakiisha Nabad Suggida.
Tani ayaa la sheegay inay qayb ka tahay is bedelo maalmahan socday oo ku aadan Hoggaanka Nabad Suggida ee Gobolka Banaadir oo la doonaayo in wajiyo cusub ay ka soo muuqdaan.
Nabad Suggida Gobolka Banaadir, ayaa waxa ay ku shaqeeyaan qaab dhar cad ah, iyadoo dhalinyaro kala duwan oo NISA ay ka hawlgalaan Degmooyinka Gobolka Banaadir, kuwaa oo ku hubaysan bastoolado.
Taliyaha Nabad Suggida Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ayaa waxaa lagu xantaa inuu qaato go’aano shaqsiyan ah oo uusan cidna kala tashan xilliyada qaarkood.
Maxaa ka jira in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir